Bermuda sy Bahamas: Karaiba sa Tsia?
Ny fitoviana sy ny fahasamihafana eo amin'ny toerana fitsangatsanganana
Matetika ianao no hahita an'i Bermudes sy Bahamas miaraka amin'ny nosy Karaiba, na izany aza, tsy misy ny fizahantany mitaiza roa ao amin'ny Ranomasina Karaiba.
Ny toerana malalaka any amin'ny Oseana Atlantika Avaratra no misy azy ireo. Nanomboka ny fisafotofotoan-tsakafo ara-barotra sy tranonkala izay mametraka ny nosy iray manontolo ao anatin'ny lisitra iray rehefa mivarotra ny mpanjifa.
Ny Ranomasina Karaiba
Ny faritra amoron-dranomasina Karaiba dia hita any amin'ny takelaka Karaiba.
Ny faritra dia ahitana nosy 700, nosy, vatohara ary sarety. Any atsimo atsinanan'ny Hoalan'i Meksika sy ny kontinanta Amerikana avaratra, atsinanan'i Amerika Afovoany, ary avaratr'i Amerika Atsimo. Samy any avaratry ny Ranomasina Karaiba ny Both Bahamas sy Bermudes.
Manakaiky ny US
Bermuda dia mitovy amin'ny habeny toa an'i Savannah, Zeorzia, eo amin'ny 650 kilaometatra eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i Amerika, raha ny Bahamas kosa mipetraka eo akaikin'ny morontsirak'i atsimon'i Florida (tokony ho 50 kilaometatra) ary miparitaka any atsimo mankany Cuba sy Hispaniola (Haiti sy Dominikanina) Repoblika).
Ankoatra ny maha-sahiran-tsaina azy ireo amin'ny nosy Karaiba , ny fikambanana hafa eo anelanelan'ny roa: Bermudes sy Bahamas dia hita ao anatin'ilay fiaramanidina Bermuda mistery, ary ny roa dia tsy mivadika amin'ny satroboninahitra Britanika. Bermuda dia Britanika any ampitan-dranomasina ary ny Bahamas dia fanjakana Commonwealth.
Bermuda dia heverina ho mihoatra ny toeram-piandrasana ambony indrindra, ka mahatonga azy kokoa mifanaraka amin'ny toeram-pambolen'i Martha na ny Hamptons noho Freeport na Nassau any Bahamas.
Matetika no miezaka mivezivezy sy mijanona ao Bermudes. Noho ny toerana niorenany avaratra dia lasa mangatsiatsiaka ny ririnina amin'ny fotoanan'ny ririnina, noho izany dia kely kokoa noho ny any Bahamas ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra.
Na dia toa voasokajy bebe kokoa aza ny Bermudian, aza avela hamitaka anao ny kiraro Bermudes. Ny Bermudiana dia mbola te hanana fotoana tsara.
Ny baran'ilay barika malaza indrindra ao amin'ny nosy, ny The Swizzle Inn, dia mampanantena fa ianao dia "hitodi-doha ary ho tafintohina".
Bermuda dia nosy iray. Ny Bahamas dia ahitana nosy mihoatra ny 700, ka 30 monja no misy mponina. Bahamiana ny fanjonoana ara-panatanjahantena, fikambanana iraisam-pirenena, ary ny fankalazana ny fetibe Junkanoo (Fetibe). I Junkanoo dia fomban-drazana nentin-drazana Afro-Bahamian ny 'mihazakazaka', mozika, dihy sy ny zavakanto any Nassau (ary ny sasany amin'ireo nosy hafa) isaky ny Andro Fihetsiketsehana sy ny Taom-baovao. Junkanoo dia ampiasaina ihany koa mba hankalaza fety sy fialantsasatra hafa toy ny Andro Enimpotra.
Ny lafiny mampiavaka ny tora-pasika amin'ny toerana roa dia ny fahasamihafana eo amin'ny fasika. Manerana izao tontolo izao, i Bermudes dia fantatra amin'ny tora-pasika mavokely. Io tsaho io dia tsy fongotry ny maso, fa vokatry ny sombin-kisoa kely iray antsoina hoe foraminifera mena, izay misy loko mena izay mifangaro amin'ny fasika fotsy amin'ny alàlan'ny onja.
Ho hitanao ny sandany maitso ao The Bahamas, na izany aza, ao amin'ny nosy Bahamiana ihany no misy azy ireo: Eleuthera sy Harbor Island. Raha tsy izany, ny fasika dia matetika miloko manerana ny Bahamas.
Piritry ny Caribbean Karaoke Ride Lyrics
6 Safidy Lehibe ho an'ny Bus Travel mora any Etazonia
Tranonkala telo momba ny Pickpocket mila mahafantatra
The Ice Rink ao amin'ny PPG Place
Ny Valan-javaboarim-pirenena tena tsara hitsidika azy amin'ny fahavaratra
Old Post Office Pavilion & Clock Tower ao Washington DC
Fialan-tsasatra eny an-dalana - Fijanonan'ny alina eo akaikin'ny Tandrefana Atsimo
Torolalana amin'ny Fitoriana avy any Chicago O'Hare mankany amin'ny seranam-piaramanidina Midway
Mifandray amin'ny kolontsaina ao amin'ny nosy San Blas Panama
Ny Top 7 Travel Books Australian Travel